iOS 15 uye iPadOS 15: Zvese zvaunoda kuti uzive kugadzirisa | IPhone nhau
IOS 15 uye iPadOS 15 vari pano, izvi ndizvo zvese zvaunoda kuti uzive usati wagadzirisa
Miguel Hernandez | 20/09/2021 18:55 | iOS, iOS 15, iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo Cupertino kambani yakayambira panguva yayo yazvino Keynote umo pakati pezvimwe zvinhu takaona kuvhurwa kweiyo nyowani iPhone 13 yekuuya kweiyo nyowani nhare yekushandisa sisitimu yeese iPhone neiyo iPad, isu zviri pachena kuti tiri kutaura nezve iOS 15 uye iPadOS 15.
Dzazvino vhezheni dzeIOS uye iPadOS dzinouya neine mashoma maficha maficha uye ave kuwanikwa kurodha nekuisa. Isu tinotora mukana uno kukuyeuchidza nezvekukosha kwekuchengeta zvishandiso zvedu zvichigadziriswa kuitira kuchengetedza kuvanzika kwedu uye kudzivirira chero rudzi rwe malware. Dai iwe wanga wakamirira iOS 15, nguva yasvika yekutora leap.
1 Nhau dzese muIOS 15
1.1 FaceTime uye SharePlay
1.2 Yakagadziridzwa uye ine gakava Safari
1.3 Mamepu uye mamiriro ekunze akagadzirwazve
1.4 Yekusimudzira modhi uye nehungwaru kutaridzika
1.5 Dzimwe nhau diki
2 Yese nhau muPadOS 15
3 Ndeapi machina anozo gadziridza kune iOS 15 uye iPadOS15?
4 Maitiro ekuvandudza kune iOS 15
Nhau dzese muIOS 15
Chekutanga pane zvese isu tichazotarisa kuti ndeapi mashoko ayo inobata iOS 15, sisitimu yakashoropodzwa ad nauseam nekuda kwekusakwana zvakakwana, asi inotivimbisa kugadzikana, kuchengetedzeka uye kunatsiridzwa.
FaceTime uye SharePlay
Kana iri FaceTime, chimwe chezvinhu zvikuru zvitsva zvinosvika, Iye zvino iyo Apple vhidhiyo yekufona system iyo vashandisi vayo vanokoshesa zvakanyanya ichakubvumidza iwe kumisikidza a portrait modhi izvo zvinokanganisa kumashure kwekufona kuburikidza nesoftware, ichitarisa pamunhu, sezvinoita zvimwe zvakafanana zvinoshandiswa. Pamusoro pezvo, odhiyo yepakati inowedzerwa kumafoni eFaceTima, kunyangwe iko iko kushanda kuchiri kuzivikanwa chaizvo mune izvi.
Kugona kuwedzera zvishandiso kwete apuro kufona kuburikidza nekubatanidza.
Nokuda kwayo SharePlay chirongwa chitsva chinotibvumidza kugovana zvirimo zvekuona pamwe nemimhanzi kubva kuApple Music, akateedzana kana mabhaisikopo kubva kumasangano akabatana seDisney +, TikTok neTwitch munguva chaiyo. Nenzira iyi iwe unogona kugovana skrini kuburikidza neFaceTime kana kutora mukana weichi chemukati munzira inoenderana.
Yakagadziridzwa uye ine gakava Safari
Kambani yeCupertino yakatanga nehukuru hwekuvandudza kweSafari iyo yakagadziridzwa pamwe nekupfuura kwema betas. Iye zvino isu tichazobvumidzwa kumisikidza nhevedzano yematepi anoyangarara sezvaiitika paIpad. Dzimwe dzeshanduko idzi dzinogona kusarudzwa nemushandisi kuitira kuti dzirege kudzikatidza ruzivo, pamwe nekuwedzera akateedzana emamepu uye mapfupi.
Iyi yekuvandudza yeSafari yaunza zvichemo zvakawanda kubva kuvaongorori, saka Apple yakafunga kugadzirisa iyo system nekufamba kwebetas.
Mamepu uye mamiriro ekunze akagadzirwazve
Chirongwa Apple Mepu inoramba ichishanda kupa makwikwi kuGoogle Mepu, ikozvino ichapa yakawanda yekutsvaga data data uye zvemukati zvinowedzerwa nezve nzira nemirayiridzo yavo.
Nenzira imwecheteyo iyo Mamiriro ekunze app ichawedzera zvimiro zvitsva zvemifananidzo maererano neshanduko yemamiriro ekunze uye mamiriro ezvakatipoteredza. Iyo ziviso sisitimu yemvura inonyevera nezve yakagadzirwazve.
Yekusimudzira modhi uye nehungwaru kutaridzika
El Concentration modhi Izvo zvinokutendera iwe kumisikidza zviyeuchidzo uye kunyorera zvinobudirira kuitira kuti zvirege kutikanganisa isu. Izvo zvinosvika pakufungidzira yepamusoro vhezheni yeiyo Usavhiringidze maitiro iyo vashandisi vazhinji vakada panguva yemaawa marefu ekuita teleworking.
Vashandisi vanozokwanisa kuigadzira pamurume kuti vafarire kana kunamatira kuCompertino kambani presets. Nenzira imwecheteyo, Kutarisa zvinozotibvumidza kutsvaga kunyangwe mumifananidzo, tichiisanganisa pamwe nebasa Rarama Runyorwa izvo zvinoshandura zvinyorwa zvemifananidzo munguva chaiyo, pamwe nekutora kuti ugovane kana kuikopa chero kwatinoda.
Dzimwe nhau diki
Chirongwa Notes inowedzera kugona kwekugadzira mamaki esangano uye kutaura kune vamwe vashandisi mukati memanotsi.
Iyo yekushandisa yekutsvaga ikozvino ichakubvumidza iwe kuti utsvage zvishandiso kunyangwe kana zvadzimwa.
Tab nyowani mukushandisa Utano ikozvino zvichatibvumidza kugovana iyo data neboka rekurapa uye kudzikama kana tichifamba basa.
Yese nhau muPadOS 15
Pane yedu YouTube chiteshi isu takatsanangura kwenguva yakareba ndeapi makuru makuru eiyo iPadOS 15, ayo, sezvaunonyatso ziva, hachisi chinhu chinopfuura imwe shanduro yakaoma kunzwisisa yeIOS 15.
Kutanga, iPadOS 15 inowedzera kukura uye mashandiro eiyo Widgets, kuenda navo kuchiratidziro chikuru, sezvinoitika muIOS 15. Nenzira imwecheteyo, iyo system system kuburikidza ne raibhurari yekushandisa nhaka kubva ku iPhone inouyawo kune iyo iPad, kugara zvachose munzvimbo yakanyanyisa yekushomeka.
Mamwe ese ekubatanidzwa senge kuvandudzwa mukushandisa Notes vanouyawo kuIpad, saka zvakanyanya isu tichava nenyaya dzakawandisa kana kushoma pane iOS 15, chinhu chakashoropodzwa zvakanyanya nevamwe vaongorori vanotarisira chimwe chinhu kubva kuIpad inoshanda sisitimu.
Ndeapi machina anozo gadziridza kune iOS 15 uye iPadOS15?
Muchiitiko cheIOS 15 Rondedzero yacho inenge isingaperi, pamusoro peiyo iPhone 13 iyo inosvika kubva munaGunyana 24 anotevera:
Kune rumwe rutivi, iPadOS 15 iri kuuya ku:
11-inch iPad Pro (chizvarwa chechitatu)
12,9-inch iPad Pro (chizvarwa chechitatu)
iPad (chizvarwa chechisere)
iPad mini (yechishanu chizvarwa)
iPad Mhepo (yechina chizvarwa)
Maitiro ekuvandudza kune iOS 15
Iwe unogona kusarudza iyo yechinyakare nzira, iyo OTA yekuvandudza inongoda chete anotevera matanho.
Vhura iyo application Zvirongwa uye enda kuchikamu General.
Mukati General sarudza sarudzo Software kugadzirisa.
Enderera nekutora uye ichaisa otomatiki.
Kana uchida, unogona kuisa iOS 15 zvakachena zvakakwana kuitira kudzivirira chero mhando yezvikanganiso uye kutora mukana kugadzira kugadzirisa kune yako iPhone.
Unogona kutevera iyo zvidiki uye zvakapusa matanho atakasiira iwe mune yedu chinyorwa yeActualidad iPhone nezve izvi zvitsva. Izvi ndizvo chaizvo zvese zvaunoda kuti uzive nezve iOS 15, ino ndiyo nguva yekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » IOS 15 uye iPadOS 15 vari pano, izvi ndizvo zvese zvaunoda kuti uzive usati wagadzirisa
inoita Mavhiki e4
Mushure mekuvandudza, ini ndinoona iro dzvuku bharumu mumasetingi "iPhone yekuchengetedza inenge izere", asi ndinoipa uye haipinde, inoramba yakadaro. Ini ndakadzima ingangoita 50GB, ini ndine nzvimbo yekusiya. Ini ndakadzorerazve, uye hapana, ichiripo uye kana ndikaibaya, haina kundidzorera, kana kuenda. Chero mhinduro kunze kwekudzorera? Ndatenda
Pindura kuna Medusa
iPhone 14 ine buri pachiratidziri, iPhone 15 ine Kubata ID pachiratidziri, iPhone 16 kupeta
Kuo anoti iwo maodha eiyo iPhone 13 akakurisa kupfuura gumi nemaviri, mukuwedzera isu ticharamba tichiita shoma stock